Odayaal, Waxgarad, Culumaa'uddiin iyo Xildhibaano kulan ku yeeshay Muqdisho
» Odayaal, Waxgarad, Culumaa'uddiin iyo Xildhibaano kulan ku yeeshay Muqdisho
Kulan ballaaran oo isugu yimaadeen waxgarad, Odayaal, Culumaa'udiin iyo Xildhibaano ka socday Beelaha Hawiye ayaa maanta lagu qabtay Hotelka Saxafi ee magaalada Muqdisho, iyadoo ujeedka kulanka uu ahaa sidii beelaha Hawiye ugu midoobi lahaayeen in aysan Al-Shabaab kala qeybin, kadib markii dhowaan Shabaab sheegeen in ay heshiis la galeen mid ka mid ah Beelaha Hawiye.
Xarunta Wada hadalka Bulshada ee CCD oo suura gelisay isu imaatinka Odayaasha iyo waxgaradka ka socday Beelaha Hawiye iyo qaban qaabada kulanka ayaa waxaa ka qeyb galay Gudoomiyaha Golaha Odayaasha Dhaqanka iyo Midnimada Beelaha Hawiye, Maxamed Xasan Xaad, Xildhibaano uu ka mid ahaa C/llaahi Geeddi Shadoor, Xubno ka socday Dhaqanka iyo Dallada Ex Banaadir, Gudoomiyaha Odayaasha dhaqanka Gobolka Hiiraan Maxamuud Axmed Xooshow iyo Odayaal dhaqameedyo ka kala socday Beelaha kala duwan ee Hawiye.
Ugu horeyn waxaa kulanka furay Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo ah Gudoomiyaha Odayaasha dhaqanka Hawiye oo ugu horeyn ku tilmaamay isu imaatinkan fursad qaali ah, isla markaana ay tahay mid muhiim ah dadka markii ay wada hadlaan in xalka dhow yahay, isagoo uga mahad celiyay Hey'adda CCD ee soo qaban qaabisay.
Nabadoon Xaad ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin hadalkii ka soo yeeray Xasan Dahir Aweys uu ku tilmaamay qaar ka mid ah Beelaha inay Gaalada la safan yihiin ayna soo hogaamiyaan, isagoo raali gelin ka bixiyay hadalkaas.
"Anigoo ku hadlaya magaca Beelaha Hawiye ee isaga Xasan Dahir ka mid ahay, aniguna dhaqankoodii madax u ah inaan raali gelin ka bixiyo, hadalkaas qof insaan ah oo maskax fayow qaba ku hadli kara ma ahan, Beelihii loo gafayna waan ka raali gelinayaa, isagana waxaa dalbayaa fursad waa jirtaayee raali gelin haka bixiyo"ayuu yiri Maxamed Xasan Xaad oo intaa ku daray in qofka qaldami karo, hase ahaatee loo baahan yahay in qaladkiisa dib ka saxo.
Maxamed Xasan Xaad ayaa sidoo kale sheegay in Xasan Dahir aanu xilligan talo aheyn, isla markaana yahay qof sida maxbuus oo kale yahay, isagoo intaa ku daray in horay uu fursado badan iska lumiyay sida uu yiri.
"Anaga wax badana ognahay in Xasan maanta uusan Talo heyn oo sida Maxbuuski kale yahay, horay fursada soo martay, wuuna iska lumiyay, hadana wuxuu ku haminayaa inuu talada soo galo"ayuu sii raaciyay hadalkiisa Nabadoon Maxamed Xasan Xaad.
Waxaa uu sheegay in dalka uu soo maray dhibaato adag, isagoo tilmaamay in aysan ku talineyn in qori caaradii xukun lagu raadiyo, waxaana uu ku baaqay in Nabada laga shaqeeyo.
Muxiyadiin Xasan Afrax oo ah Gudoomiyaha Dallada Ururada Bulshada Rayidka deegaanada ex Banaadir ayaa isna hoosta ka xariiqay in Al-Shabaab xilligan bur bur ku dhow yihiin, isla markaana dhinacyo kala duwan uu hada culeys ka heysto, isagoo soo qaatay sida Muqdisho u kala furantay xilligan, isu socodkana caadi ku soo laabtay, waxaana uu xusay in hada ay bilaabeen in beelaha ay naf ka raadiyaan, qolo aan beelo matalina ay la showraan si buu yiri ay madaxda isku dhex qariyaan.
Afhayeenka Odayaasha Hawiye Axmed Diiriye Cali ayaa isna sheegay in odayaasha dhaqanka ay dadaal badan sameeyeen, isagoo xusay in doorkooda ahaa mid muuqday oo dhinaca nabada ku wajahnaa, isagoo cadeeyay in loo baahan yahay in nabada la raadiyo, waxaana tusaale u soo qaatay in Magaalada Muqdisho hadii ay nabad noqoto Gobolada kalena ay nabad ahaan doonto.
"Nimankaas waxaa leeyahay Al-Shabaab Nabad iyo nolol dadka uma heysaan, awood aad dalka ku xukuntaan ma lihidiin, kaalaya dadkiina ku soo biira, dadkaan ay wadaan ee Afganistan iyo meelahaas shishe laga keenay Xamar maxaa ka yaala, dhibaato iyo hoog ayay u yimaadeen, marka dadkooda haku soo laabteen"ayuu yiri
Caaqil Xasan Cilmi Yaxye oo ka mid ah waxgaradka Beelaha Hawiye ayaa dhankiisa sheegay in heshiiska la sheegay in Shabaab beel la galeen aanu wax jira aheyn, isla markaana la is weydiiyo inuu dhaqan galayo iyo in kale.
"Afar nin Ceelasha jooga ayay nimankaas la heshiiyeen, mala is weydiiyay ma dhaqan galayaa, hadii Beel iyo urur heshiinaya waa in marka hore ururka tanaasulaa, heshiiskaasna wax shaqeynaha ma ahan"ayuu sii raaciyay hadalkiisa Caaqil Xasan Cilmi Yaxye.
Nabadoon Maxamuud Axmed Xooshow oo ah Gudoomiyaha Golaha dhaqanka Odayaasha Gobolka Hiiraan ayaa sheegay in Odayaasha Hawiye ay mideysan yihiin, isla markaana ay doonayan qaran, isagoo tilmaamay in Hawiye ballaaran yahay, waxaana uu tilmaamay in fariinta ay wadaan uu yahay in la isku keeno Soomaali, isla markaana dhibaatada dalka uu ku jiro laga baxo, si nabada loo raadiyo, Dowladana la garab siiyo.
"Hawiyow waxaa la idin dhahaa hawiye madoobe, hawiye wax ma garte, wax walbana idinkaa ah, aqoonta idinka leh, ganacsiga idinka leh, marka hadaad is raacdaan oo aad midowdaan la idin makala qeybin karo"ayuu yiri Nabadoon Xooshow oo intaa ku daray in Al-Shabaab lala dagaalamo, deegaanada ay heystaana laga xoreeyo.
Xildibaan C/llaahi Geeddi Shadoor oo isna ka hadlay kulanka ayaa sheegay Shabaab uu tagay, isla markaana aysan jirin cid la heshiineysa oo beelaha ka mid ah, isagoo tilmaamay dadka heshiiska la galay aysan wax ka dhumeyn oo dan ugu jirtay darteed ama cabsi ay ula heshiiyeen.
"Horta Shabaab waa tagay, qolo la heshiisa oo dabaal ah ma jiri doonto, afar nin oo Ceelasha jooga Beelo ma matasho, ninka Odayga ah ee Xasan Dahir dhalashadiisa ma xumeyn, balse in gadaal wax uga halaabeen ayaan been aheyn, intuu tartan galay oo ku hungoobay halkan sheegid uma baahna, hadana Akhtiyaara ma lahan, nin laga adkaado qaab daro waa la imaadaa, marka waxaa dhihi lahaa Odaygu markii Xisbiga bur buray Shabaabna isu dhiibay ayay talada ka xumaatay"ayuu yiri Xildhibaan C/llaahi Geeddi Shadoor oo intaa ku daray inuu aamisan yahay in dani ka keeneyso hadalada uu ku hadaaqay ama uu doonayo inuu ku badbaado.
Odayaashii iyo waxgaradkii ka qeyb galay kulankan ayaa sheegay in Beelaha ay ka towfiiqaan, sidii ay hal mabda'a uga qaadan lahaayeen xaalada dalka ku jiro, isla markaana Beesha ay hormuud uga noqoto sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka oo dhan.
Kulankan ayaa ku soo beegamaya xilli dhowaan Al-Shabaab sheegeen inay heshiis la galeen mid ka mid ah Beelaha, sidoo kale Hadal uu Ceelasha Biyaha ka jeediyay maalintii Ciida ayaa Xasan Dahir ku ijaafeeyay Beelaha Abgaal, Majeerteen iyo Ogaadeen inay Gaalo raac yihiin, iyadoo waxgaradkii ka qeyb galay kulanka ay raali gelin ka bixiyeen hadalkaas.